1. တိရစ္ဆာန်အစာကျွေးစက်ရုံတစ်ခုလုံးအတွက်စိတ်ကြိုက်ဒီဇိုင်း. ကွဲပြားခြားနားသောပစ္စည်းများသည်, သင့်ရဲ့တိကျတဲ့လိုအပ်ချက်သို့မဟုတ်သင်ဘတ်ဂျက်, ကျွန်ုပ်တို့သည်စက်ယန္တရားအချို့ကိုထည့်။ ဖယ်ထုတ်နိုင်သည်.
2. ဒီတိရိစ္ဆာန်အစာစက်ရုံကျယ်ပြန့်စွမ်းရည်အတိုင်းအတာရှိပါတယ်. ၎င်း၏စွမ်းရည်ကနေနေကြပါတယ် 1 t / h သို့ 20 t / h. သင့်မှာပိုကြီးတဲ့ထုတ်လုပ်မှုလိုအပ်တယ်ဆိုရင်, ငါတို့သည်လည်းသင်တို့အဘို့လုပ်နိုင်ပါတယ်.
3. PLC ထိန်းချုပ်မှု. အထက်ပါလုပ်ငန်းစဉ်များအားလုံးကိုကျွန်ုပ်တို့၏အဆင့်မြင့်ကွန်ပျူတာထိန်းချုပ်စနစ်ဖြင့်ထိန်းချုပ်လိမ့်မည်.
ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့မွေးမြူရေးခြံလုပ်ငန်းဟာမကြာသေးမီနှစ်များအတွင်းပိုမိုမြန်ဆန်စွာတိုးတက်လာသည်, ရိုးရာအစာကျွေးခြင်းသည်အစားအစာလိုအပ်ချက်နှင့်မကိုက်ညီတော့ပါ. လယ်သမားများသည်အခြားအစာကျွေးသောထုတ်ကုန် - ပါသည့်အစာကျွေးသောအစာကိုစတင်ရှာဖွေကြသည်, သောပိုမိုကျန်းမာအာဟာရရှိပါတယ် ,အစာကြေလွယ်သည်,သိုလှောင်ရန်လွယ်ကူပြီးသယ်ယူပို့ဆောင်ရန်လည်းလွယ်ကူသည်. တောင့်တင်းသည့်အစာထုတ်လုပ်ရန်ကုန်ကြမ်းများသည်မြက်ပင်များဖြစ်နိုင်သည်,ကောက်ရိုးစာ,ဗီတာမင်,မြက်ပင်ထမင်း,ပြောင်းဖူးမုန့်ညက်,နောက် ... ပြီးတော့, ၎င်းကိုရလွယ်ကူပြီး cattles များအတွက်စိမ်းလန်းသောကုန်ကြမ်းတစ်မျိုးဖြစ်သည်. ကြက်သားအစာအတွက်ချက်ပြုတ်နည်းများကိုလည်းသင်လုပ်နိုင်သည်, ဝက်အစာကျွေး, ကျွဲနွားကျွေးသည်, ထိုကဲ့သို့သောကုန်ကြမ်းမျိုးကိုအသုံးပြု။ ငါးအစာကျွေးခြင်းသို့မဟုတ်အခြားတိရိစ္ဆာန်များ, ဒါ့အပြင်ကြက်၊ ဘဲအားလုံးအတွက် pelleted feeds တွေရရှိနိုင်ပါတယ်, မွေးမြူရေးနှင့် Aqua.
4. နောက်ဆုံးလုံးလေးများသည်ချောမွေ့ပြီးအန္တရာယ်ဖြစ်စေနိုင်သောသက်ရှိများမရှိချေ, တိရိစ္ဆာန်စွမ်းဆောင်ရည်တိုးတက်အောင်.
5. အားကောင်းတဲ့နည်းပညာပံ့ပိုးမှု. ကျွန်ုပ်တို့တွင်စီမံကိန်းအတွက်ပစ္စည်းကိရိယာများကိုဒီဇိုင်းဆွဲရန်နှင့်ထုတ်လုပ်ရန်ကျွန်ုပ်တို့တွင်ကိုယ်ပိုင်စက်ရုံရှိသည်။ တပ်ဆင်ရန်အသုံးပြုသူများ၏ဒေသသို့အင်ဂျင်နီယာများကိုစေလွှတ်မည်။, ရုံးတင်စစ်ဆေးပြေးနှင့်လေ့ကျင့်ရေး debugging, တိရိစ္ဆာန်အစာထုတ်လုပ်မှုလိုင်းသည်ကောင်းစွာအလုပ်လုပ်ကြောင်းသေချာစေရန်.
6.ကျိုးကြောင်းဆီလျော်သောနည်းပညာနှင့်အတူ, ဤကျွဲနွားအစာထုတ်လုပ်သည့်စက်ရုံသည်စွမ်းအားမြင့်ပြီးစွမ်းအင်သုံးစွဲမှုနည်းသည်. ထုတ်လုပ်နိုင်သည် 1000-3000 နှစ်စဉ်ပြောင်းကုန်ပြီနှုန်း mash နှင့်တောင့်အစာတန်ချိန်;
7. modular ဖွဲ့စည်းပုံ: ကျွဲနွားအစာထုတ်လုပ်သည့်စက်ရုံသည်ကျစ်လစ်သိပ်သည်းသည်, ကြမ်းခင်းlessရိယာလျော့နည်းခြင်းနှင့်ကြိတ်ခွဲရုံမျှော်စင်တွင်လိုအပ်ချက်နည်းပါးခြင်းတို့ပါဝင်သည်, အရပ်ဘက်လုပ်ငန်းများတွင်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုနည်းပါးသည်. ကွန်တိန်နာ modular ဖွဲ့စည်းပုံသည်တပ်ဆင်ခြင်းနှင့်ဖြုတ်တပ်ခြင်းအတွက်အဆင်ပြေသည်, အဆိုပါတင်ပို့ခြင်းနှင့်တပ်ဆင်လွယ်ကူချောမွေ့;
8. ဗဟိုထိန်းချုပ်မှု: အဆိုပါ analogue panel ကိုမွေးစားသည်. စက်တွေအားလုံးအပြန်အလှန်ဆက်သွယ်ပြီးလုံခြုံနိုင်ပါတယ်, နှိုးစက်ကိရိယာရရှိနိုင်ပါသည်. စစ်ဆင်ရေးရိုးရှင်းပြီးအဆင်ပြေသည်;
9. ကျယ်ပြန့်သက်ဆိုင်နယ်ပယ်: ကျွဲနွားအပင်များမှကြက်၊ & မွေးမြူရေးအစာနှင့်ငါးအစာနှင့်အလယ်အလတ်နှင့်အငယ်စားအစာကြိတ်ခွဲစက်များနှင့်မွေးမြူရေးခြံများအတွက်အသုံးပြုသည်.
တိရစ္ဆာန်အစာကျွေးစက်ရုံပါဝင်သည်စက်ယန္တရားတစ်ခုပြီးပြည့်စုံသော အစာကြိတ်ခွဲစက် စက်,အစာရောနှောစက်,အစာကျွေး လုံးတောင့်ကြိတ်စက်လက်စွပ်,အအေးစက်ကိုကျွေးပါ, နှင့်အထုပ် macine အစာကျွေး.
ကြိတ်ခွဲကိရိယာများဒီပေါင်းစပ်ထည့်သွင်းထားသည်. ဤကျွဲနွားတိရစ္ဆာန်များကိုအစာကျွေးသောစက်ယန္တရားသည်ကုန်ကြမ်းများခုတ်ထွင်ရန်လိုအပ်သောအသုံးပြုသူများအတွက် ပို၍ သင့်တော်သည်. တိရိစ္ဆာန်အစာတောင့်များသည်ထုထည်ဖြင့်ပြုလုပ်ထားသောပစ္စည်းများဖြစ်သည်. ကွဲပြားခြားနားသောတိရိစ္ဆာန်လိုအပ်ချက်ကွဲပြားခြားနားသောအရွယ်အစား feed ကိုလုံးလေးများကိုက်ညီ. ကျွဲနွားအစာကျွေးခြင်း, ဝက်အစာကျွေးခြင်းနှင့်သိုးအစာကျွေးခြင်း ၆-၈ မီလီမီတာရှိသောကုန်ကြမ်းများ, 3-5ကြက်သားများအတွက်သင့်လျော်သောမီလီမီတာကုန်ကြမ်း, ယုန်, ငှက်များ, ငါးနှင့်တိရိစ္ဆာန်သားပေါက်များသည်အစာကျွေးသည်. အစာတောင့်များ၏အရွယ်အစားသည်လုံးတောင့်ပြုလုပ်သောသေပေါက်အရွယ်၏အရွယ်အစားပေါ်တွင်မူတည်သည်. ဒီတော့, ကုန်ကြမ်းများကိုသင့်လျော်သောအရွယ်အစားသို့အစာတောင့်ထုတ်လုပ်သူသို့မထည့်သွင်းမီကြိတ်ခြင်းသည် ပို၍ ကောင်းသည်
သင့်လျော်သောရောနှောခြင်းကိုပူးတွဲအကျိုးသက်ရောက်မှုဟုခေါ်သောယူနစ်တစ်ခုဖြင့်သတ်မှတ်နိုင်သည်. အနိမ့်ဆုံးပြောင်းလဲမှု၏ Co- အကျိုးရှိစွာသေးငယ်ရောစပ်၏အရည်အသွေးဖြစ်လိမ့်မည်. ကျွန်ုပ်တို့၏ကောင်းမွန်စွာဒီဇိုင်းရေးဆွဲထားသောရောနှောစက်သည်အလွန်ကောင်းမွန်သောအရည်အသွေးရှိသည်. ဒီအပြင်မှာရောနှောစက်ဟာအရည်နဲ့ရောစပ်ဖို့ပြဌာန်းချက်တစ်ခုရှိသင့်တယ်။, CV ≤ 5%, ခွဲခြားထားခြင်းမရှိပါ; တိရစ္ဆာန်အစာစက်ရုံသုံးစက်ယန္တရားများရောစပ်ခြင်းသည်နူးညံ့သည်, အဆိုပါဝန်အကွာအဝေး variable ကိုဖြစ်ပါတယ်; အပြည့်အဝ - အောက်ခြေလျှပ်စစ်အဖွင့်နှင့်ပစ္စည်းချ, အစာရှောင်ခြင်းဥတု, အနိမ့်ပစ္စည်းကျန်နေတဲ့နှုန်းသည်; ပြန်လာလေကြောင်းပြွန်သတ်မှတ်မည်, ဖုန်မှုန့်မပါ ၀ င်, အပြည့်အဝပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းရေးလိုအပ်ချက်များကိုဖြည့်ဆည်း
ဤကျွဲနွားအစာကျွေးသောစက်ယန္တရားသည်မြင့်မားသောတိကျသောဂီယာအသွင်အပြင်ရှိသည့်လက်စွပ်သေတ္တာစက်လေးဖြစ်သည်, ပတ်ပတ်လည်ကွင်းအမျိုးအစားအမြန် detach လုပ်အတွက်လက်စွပ်သေ, pelletting mchine ကိုအဓိက ၀ င်ရိုးတွင်တည်ဆောက်ထားပြီးအလေးချိန်လျော့နည်းပြီးချောမွေ့သောဂီယာကိုထုတ်လုပ်သည်, ရိုးတံ၏ရှည်လျားသောအလုပ်လုပ်ဘဝ, ဆူညံသံ. ၎င်းကိုအဆက်မပြတ်ရေနံထည့်သည့်စနစ်တပ်ဆင်ထားသည်. တုန်ခါမှုနှင့်တူညီသော Octagon current-counter အေး (၏တောင့်အချင်း 1.5 12mm မှ) ထိုကဲ့သို့သော n le ယိုစိမ့်မှုနှင့်ပိတ်ဆို့ခြင်းမဟုတ်သောအားသာချက်များကိုပေးထားသည်, အအေးခံခြင်းနှင့်တောင့်တင်းခြင်း၊. rotary grading sifter ကိုအသုံးပြုရမည်, ရိုးရှင်းသောဖွဲ့စည်းပုံတင်ပြ, ပြနာအနည်းငယ်, ရေနံဖြည့်ခြင်းနှင့်ဆူညံသံနိမ့်ခြင်းမလိုအပ်ပါ
cr crumbler စက်ကိုကျွေးပါ
သုံး roller ဖွဲ့စည်းပုံ, မျှတပြီးစဉ်ဆက်မပြတ်အလုပ်, ချောထုတ်ကုန်များ၏တန်းတူအရွယ်အစား၏အားသာချက်များ, မြင့်မားကျိုးပဲ့ထိရောက်မှု.
လျော့နည်း grading ပြန်လာသောပစ္စည်းများ, ချောထုတ်ကုန်မြင့်မား, လမ်းခွဲနှင့်အတူတပ်ဆင်ခဲ့သည်, စားသုံးမှုနိမ့်.
◊ Screener စက်
အနိမ့်ပြိုကွဲ, ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းမှုလျော့နည်း, ရိုးရှင်းသောစစ်ဆင်ရေး, ဂီယာအုံသည်ဂီယာမဟုတ်သောဂီယာလမ်းကြောင်းကိုကျင့်သုံးသည်, ရေနံချောဆီနှင့်အတူ dispense, ရေနံယိုစိမ့်မှုနှင့်အတူရေနံညစ်ညမ်းမှုကိုရှောင်ကြဉ်ပါ,ဒါဟာအမြီးလျှောထောက်ခံမှု elastic ထောက်ခံမှုသို့ပြောင်းလဲစေပါသည်, သိုက်ပစ္စည်းကိုရှောင်ကြဉ်ပါလက်ဝါးကပ်တိုင်ညစ်ညမ်းမှုကိုရှောင်ကြဉ်ပါ